BlueLock Video: Igwe ojii | Martech Zone
Nnukwu mkparịta ụka na nkọwa dị mfe nke igwe ojii kọwapụta on Chọọ TV mụ na enyi m, Brian Wolff, na BlueLock.
Ọ bụ teknụzụ na-adọrọ adọrọ, nke m kwenyere, ga - emecha Internetntanetị niile. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgụ nnukwu akwụkwọ maka ọdịnihu igwe ojii, m ga-akwado ya Nicholas Carr Nnukwu Mgbanwe.
Tags: gbachi nkịtịchọrọ
Ọkt 9, 2008 na 9:15 PM
Enwere m mmasị na nnukwu mgba ọkụ. O nyere m ụzọ dị iche iche dị iche iche na-elele kọmputa na ịntanetị. Ka teknụzụ na-agbanwe, ịkwaga na Cloud Computing gburugburu ebe obibi nwere ezi uche maka ụlọ ọrụ nha niile.
Brian rụkwara ezigbo ọrụ ịkọwa ihe nkiri vidio a!